Sidee loo qaabeeyaa Beddelista Xalka ee ku yaala Windows
Windows Nidaamka & Amniga
Si habboon u hagaajinta Qalabka Xalinta Beddelka ee Windows
Tababarka ku saabsan Raadinta Qaraarka Nidaamka Kala duwan ee Windows
Waxaa jira waqtiyo la qabsashada qaabka xallinta khariidadda ee kombiyuutarkaaga laga yaabo inay lagama maarmaan noqoto si loo xalliyo mashaakilaadka cabbirka bandhigga ee korjoogayaasha iyo aaladaha kale ee wax soo saaraya sida mashruucyada. Ha sugin ilaa aad isku dayayso inaad ku muujisid bandhiggaaga sireed ee dhagaystayaasha aad xiiseyneyso si aad u ogaatid sida loo xallinayo qaraashka screen ee Windows.
Sida Loo Beddelo Beddelista Kumbuyuutarka ee Windows
Tallaabooyinka lagu beddelayo xallinta khariidadda ayaa ah mid deg deg ah oo quruxsan, laakiin waxaa jira kala duwanaan ku xiran tahay noocaaga Windows .
Guddi Xakameysan furan oo ka yimid Isticmaalka Isticmaalka Gurmadka (ama isticmaal khariidadda gaaban ee Win + X ) haddii aad ku socoto Windows 10 ama 8. Isticmaal Tusaha Bilaabista ee Windows versions.
Talo: Waxaad furi kartaa kormeerka kumbuyuutarka ee wadahadalka socodka ama amar kale oo amar ah , oo leh amarka guddiga kantaroolka .
Muuqaal Furan iyo Shakhsi ahaaneed (oo loo yaqaan ' Appearance and Themes in XP'). Ku tallaab tallaaban haddaad fiirinayso Guddiga Koontaroolka dalabkooda.
Dooro Muuqaal ama, haddii ay ku jiraan Windows Vista, Shakhsi ahaaneed .
Si aad u hesho qaabka xallinta khariidadaha ee Windows 10, 8, ama 7, dooro Bedelida goobaha muujinta dhinaca bidix ee shaashadda. Haddii aad ku jirto Windows 10, sidoo kale guji ama ku dheji xiriirka cinwaanada sare . Isticmaalayaasha Windows Vista waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan " Display Settings" , halka kuwa isticmaala Windows XP, tagaan Qeybaha Xayeysiiska Muuqaalka .
Isticmaal liiska hoos-hoos-u-dhigidda ama xajiyaha ee ku xiga Qaraarka (XP wuxuu ugu yeeraa "Screen Resolution" ) si aad u soo qaadatid xalka khilaafka ee duwan. Xaaladaha intooda badan, doorashada ugu fiican waa 800 illaa 600 pixels ama 1024 768 pixels , waxaa suurtagal ah in ka badan haddii aad isticmaalayso kormeer 19-inch ama weyn. Xarunta "ugu fiican" waa mid aad u saraysa oo ku saabsan doorbidkaaga shakhsi ahaaneed iyo qalabkaaga.
Guji ama tuubo Codso ama OK si aad u badbaadiso isbedelada. Dib-u-furid waa lagama maarmaan.
Qaar ka mid ah noocyada software wuxuu u baahan yahay qaabka xalinta khariidada si loo dejiyo cabbir gaar ah. Haddii aad hesho qaladaad markaad furayso cinwaanada software, hubso inaad sameyso isbeddelada xallinta khariidadaha sida loo baahan yahay.
Muhiim: Haddii aad xallinta qiyaasta aad u sarreeyso, shaashadda ayaa laga yaabaa inay tagto madhan, taas oo macnaheedu yahay in kormeerkaaga uusan taageereynin xalka khaaska ah. Isku day goob kale.
Talooyin ku saabsan Xallinta Screen
Hab kale oo lagu bedelo qaabka xallinta bandhigyada qaar ka mid ah Windows waa in ay ku haboon tahay desktop-ka oo dooro Muuqaal , Qaraarka Shaashadda , ama Guryaha , iyadoo ku xiran qaabka aad isticmaalayso. Kadib, kaliya raac tallaabooyinka kor ku xusan.
Haddii wax ka badan hal kormeer ayaa la muujiyaa, waxaad bedeli kartaa xalka kormeer kasta si gaar ah. Kaliya guji kormeerka aad rabto inaad hagaajiso goobta. Haddii aadan hubin kormeeraha waa "1" ama "2" ama wixii la mid ah, riix Tusaalaha Aqoonsiga si aad u muujiso lambarka kormeer kasta.
Waxa la Qabto Marka La-socoshadaada Ma Qabo & Taageerada Xalinta Kumbiyuutarka
Waxaa suurtogal ah in la badalo qaabka xalka si ay u noqoto mid aan taageereynin kormeerahaaga. Haddii tani dhacdo, shaashadda waxay noqonaysaa mid madow oo kaa horjoogsanaysa inaad wax aragto, oo ay ku jirto mashiinkaaga. Tani waa mid fudud oo ku bilaabma Windows oo ah Mood nabdoon kadibna raacaya tilmaamaha kore. Waqtigaan, iska hubi inaad hoos u dhigto qaraarka si ay wax u dhacaan oo ay u badan tahay in ay taageeraan kormeerahaaga. Haddii Habka Badbaadada ah uusan shaqeynin, isku day inaad dooratid Xulashada ikhtiyaarka fiidiyowga yar-yar ee loo yaqaan " Startup Settings" (Windows 10 iyo 8) ama "Advanced Boot Options" menu ee qaababka hore ee Windows. Waxaa la yiraahdo "Windows Advanced Options Menu" ee Windows XP, doorashana waxaa loo yaqaan " Enable VGA Mode" ).
Haddii aad leedahay kormeere kale waxaad ku xiran kartaa kombiyuutarka-kan taageera xallinta sare-waxa laga yaabaa in ay dhakhso u noqoto in la sameeyo si loo bedelo qaraashka marka loo eego Windows si loogu galo Mood nabdoon.
Sida loo Leexin karo Automatic Cusbooneysiinta Dib u Dhigista Nidaamka Nidaamka Windows 7
Sida loo Bedelo NLSPATH Nidaamka Isbeddelka ee Windows XP
Sidee loo xiraa Windows 8
Sida Loo Adeegsado Adeegyada Windows 7, Vista, ama XP
Sida loo tirtiro UpperFilters iyo LowerFilters
Waa maxay lacagta Samsung?
Maaraynta Taariikhda iyo Xogta Kale ee Gaarka ah ee Safari ee OS X
GPU Kormeeraha Gacanta
Sida Loo Hubiyo Heerka Uber
Sheekadeedii Hore ee Hantidhowrka ee Kale, iyo la'aanta ciyaaraha FMV
Sideen Nuqul ugu Diiwaangaliyaa Windows?
Sidee Loo Isticmaali Karaa Calaamadaha Calaamadaha Gaar ah ee Circumflex
Xasuus qorka iPhone: Waxkasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Sida Loo Qaadayo Dib u Eegista (XBLA)
Khiyaamadda Oblivion - Sida loo helo Xeerarka Gym
Hagaha Bilowga ee Mabda'a Xirfadaha ee Naqshadeynta Sawirka
Tijaabi taariikhdaada Browsing Safari ee Windows
Sida loo Xaqiijiyo Hid.dll Looma Helin ama La Dhimo
Intee Ayay Qiimaha Lacagtu Xbox Lacagtaa?
Maxay tahay Xbox Live Silver?
Sida Loo Hagaajiyo Bilaabista Bilawga ee Windows 10
Waa maxay Wikileaks?
Sidee loo Nadiifiyaa BASH on Windows 10
Maxay Faylka BAK?
SpyPig - Adeegga Shahaadada ee Shahaadada leh